Muqdisho: Ciidamada xasilinta oo isgoysyada muhiimka ah la wareegay - Hablaha Media Network
Muqdisho: Ciidamada xasilinta oo isgoysyada muhiimka ah la wareegay
HMN:- Ciidamada sida gaarka ah loogu xil saaray xasilinta Magaalada Muqdisho ayaa la wareegay guud ahaan isgoysyada muhiimka ah ee Magaalada Muqdisho iyadoo la arkayey baaritaan ay ka wadaan inta badan Muqdisho.
Ciidmadaan oo oo isugu jiro Boolis Militari iyo nabadsugid ayaa la arkayaa iyagoo ku sugan dhammaan isgoyskada aadka loo isticmaalo ee Magaalada Muqdisho waxayna baaritaan ku sameynayaan guud ahaan gawaarida isticmaaleyso waddooyinka haddii ay xataa wataan Madaxda Dowladda .
Ciidamadaan ayaa Howlgalkii ugu weynaa oo ay ka sameyeen Mudisho ka fuliyay xaafado ka tirsan degmada Wadajir ee Magaalada Muqdisho oo dhowaan iska hor imaad ciidamadaasi kula galeen ciidamo hubeysan.
Waxaa inta abdan howlgalka laga fuliyay Xaafada Silig ee degmada Wadajir oo dhowr jeer falal dilal qorsheysan ah ka dhaceen, iyadoo dadka degaanka ay sheegeen in lagu xiray dad boqolaal ruux ah oo ku dhow 400 oo Ruux.
Waxaa Muuqato in Muqdisho hadda lagu kala adkaaday maadaama ay ciidamada Xasilinta Muqdisho ku guuleysteen inay magaalada ka ciribtiraan Ciidamadii iska dhex yaaci jiray.
Ciidamadaan ayaa waxaa loo soo tababaray inay sugaan amniga Magaalada Muqdisho oo meel xun gaaray markii Farmaajo loo doortay inuu noqdo Madaxweynaha Soomaaliya.